Chinese Archives - Torrents Movies - Download Free Torrents Movies
Torrents Movies – Download Free Torrents Movies
18+ Suffering of Ninko 2016
Author: movieer February 19, 2019
ဒီကိုရီးယား ဟာသကားက အတော်ရယ်ရပါတယ်။ ရှေ့နေဂျေချီဟာ လူပျိုစစ်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိန်းမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် မျက်လုံးချင်းတောင်ဆုံလို့မရတဲ့ အာဂယောင်္ကျားပါ။ တစ်အိမ်ထဲအတူနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းယောင်းဂူကတော့ မြာပွေလှသူဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းကြိတ်ကြွေနေတဲ့ ကောင်မလေးကိုပါ အလွတ်မပေးသူပါ။ File size…(800MB)and(280MB) Quality…HDRip 720p Format…mp4 Duration….01:40:51 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….RGB
18+, Chinese, Drama, Romance, UNCENSORED
18+ Guilty of Romance 2011
Author: movieer February 17, 2019
Guilty of Romance IMDb (6.8) ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဒီဇာတ်ကားက တော်တော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ၁၈နှစ်အထက်မှကြည့်လို့ရတဲ့ကားပါ ဇာတ်ကားကို ပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်မှုခင်းတွေအကြောင်းကို ၀တ္တုလေးတွေလိုပြန်ရေးတဲ့ မရွှေမိုး (ကိုရီးယား)ရဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုကြောင့်ပါပဲ အဲ့ဒီ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးထားတာပါ မရွှေမိုးရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ် A ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ် မတ်လ ၈ရက်နေ့ အဲ့နေ့မှာအသတ်ခံလိုက်ရပါတယ် File size…(1.1 GB) and (470 MB) Quality…Blu-Ray Rip 720p Format…mp4…
18+, Chinese, Drama, Korea, Romance, UNCENSORED
18+ Mr. & Mrs. Player 2013
အတည်တကျ အချစ်တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှ မဆောက်တည်ဘဲ နာမည်ယူ အသည်းခွဲလုပ်နေတဲ့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်မင်းသားကာဆန်ဟာ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်မလေးချီလင်းကို မြင်မြင်ချင်းပဲ ကြွေကျမြေခသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ အနေအထိုင်အမူအကျင့်တွေမတူညီကြတဲ့အခါမှာ အချစ်က မစရသေးဘူး..အဆုံးသတ်ရမလိုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ…။ ချီလင်းဟာ ကာဆန်ကိုသူနဲ့အတူလာနေဖို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး…ရက်တစ်ရာတိတိ ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ ဘာညာ ဘာညာတွေ မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိနဲ့ပါ။ ဒီကတိကို ကာဆန်တစ်ယောက်တည်နိုင်မလား သူတို့ရဲ့ အချစ်လမ်းခရီးဟာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့….။ File Size…(800MB) and (310MB) Quality…BluRay 720p Format…mp4 Duration…01:39:00 Subtitle…Myanmar Subtitle(Hardsub) Encoder…Nyeinsaeya Aung…
18+ Healing Mate 2014 Uncut Version
Dark Side Production မှတင်ဆက်သည်။ ကိုရီးယား 18+ Erotic ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်ကျကျနနနဲ့ တင်ဆက်ထားတာပါ။ Uncut Version ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဇာတ်လမ်းသွားလဲ ရှည်ကြာပြီး ၂ နာရီကျော်ကြာမြင့်ပါတယ်။ အချစ်နဲ့ရမ္မက်တွေကြားက မေတ္တာတရားအကြောင်းတွေကို ပုံဖော်ထားပြီး မင်းသမီးတွေလဲ လန်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုပံ့ပိုးသရုပ်ဆောင်ရာမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းတွေဖြစ်နေတာမို့ မိသားစုနဲ့မကြည့်သင့်သလို Not4Kid ဇာတ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ်။ File size…(1.1 GB) and (600 MB) Quality…HD-Rip 720p Format…mp4 Duration….02:14:00 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub)…
18+, Chinese, Drama, Korea, Romance
18+ Sex and Zen 2
Author: movieer February 16, 2019
1991 ကထွက်ထားတဲ့ Sex and Zen ကိုမှီငြမ်းပြီး ထပ်မံရိုက်ကူးထားတာပါ။ မင်းသမီး Shu Qi နာမည်မကြီးခင်က သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Erotic ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားပါ။ မင်းသမီး Shu Qi နဲ့ ဇာတ်ဆောင် Elvis Tsui တို့ကြောင့်နာမည်ကြီးပါတယ်။ Sex and Zen ဇာတ်ကားအဆက်တွေကိုကြည့်ချင်ရင် File size…(800MB) Quality…BR-Rip 720p Format…mp4 Duration….01:28:34 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
18+, Chinese, Korea, Romance, UNCENSORED
18+ Helter Skelter 2012
IMDb Rating (6.4) ထိရရှိထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် Japanese Psychological Horror Manga စာအုပ်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး မင်းသမီးချော Erika Sawajiri မှ အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါတယ်။ 18+ ဆိုပေမယ့် ပညာပေးဆန်ဆန်လေးရိုက်ကူးထားတာပါ။ မင်းသမီးချောလေး lilico ဟာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကအမြဲချောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူမနဲ့သူမရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်းကောင်လေးတို့အကြောင်း ပေါက်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်… Agencyက Image ကျသွားတဲ့ lilico နေရာမှာ မော်ဒယ်အသစ်ကိုအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်လာကြပါတယ် … အဲ့လို အချိန်မှာ lilico ရဲ့ဘဲကသစ္စာဖောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ… Lilico…
18+, Chinese, Crime, Korea, UNCENSORED
18+ Sexy Soccer 2004
NFO: Title: Sexy Soccer (2004) Also known as: Sing gum zhook kao Year : 2004 Genres : Comedy | Sport | Erotic Language : Cantonese Country : China Directed by : Sik Hok Min Stars : Tong Tong, Au Yeung,…
18+ Erotic Ghost Story 3
၁၉၇၃ ခုဖွား ဟောင်ကောင်မင်းသမီး Pauline Chan ရဲ့နာမည်ကြီးဇာတ်ကားပါ။ ဟောင်ကောင် Erotic ဇာတ်ကားပုံစံ ရိုက်ကူးထားပြီး မှော်အတတ်တွေ စုန်းကဝေတွေနဲ့ဖန်တီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ IMDb (5.6/10) ပါ။ (Nayi Soe မှဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။) File size…(850MB) Quality…DVDrip Format…mp4 Duration….01:31:10 Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Encoder….Nyeinsaeya Aung
3D Sex and Zen Extreme Ecstasy 2011
Author: movieer April 28, 2018
3D Sex and Zen Extreme Ecstasy Storyline Asaconceited scholar of the Ming Dynasty, Wei Yangsheng believes that since life is short, one should pursue the ultimate sexual pleasure as time allows. Wei Yangsheng encounters Tie Fei the Taoist…
10+, 18+, Chinese, Comedy, Drama, Romance, UNCENSORED
Johnny English Strikes Again 2018
Triple Threat 2017
Hello Guru Prema Kosame 2018
Lust Stories 2018